ရေယာဥ်ပျံ - Rikoooo
Beechcraft D18S နေရေနေ FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 24.3 ကို MB
အတွက် FSX သဟဇာတမူကွဲ hereProbably ပျံသန်း sim အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏အရှိဆုံးလက်တွေ့ကျကျ anphibian ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ လက်တွေ့ VC နှင့်မော်ဒယ်နှစ်ခုအကြီးအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကြောက်မက်ဘွယ်အသံ။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မီလ်တန် Shupe, စကော့သောမတ်စ်, အန်ဒရီ Folkers နှင့် Urs Burkhardt
de Havilland DHC-3 Otter PZL FS2004 ဒေါင်းလုပ်
အလွန်ကောင်းတဲ့နဲ့ရိုးရိုး။ စံနမူနာအသံ။ ထို့ပြင် "Otter" အဖြစ်လူသိများ5repaints.The က de Havilland ကနေဒါ DHC-3 အတွက်လက်ဆောင်တစ်ခု monoplane ဖြစ်ပါတယ်။ DCH-2 အဘိဓါန် Beaver က de Havilland ၏အောင်မြင်မှုကိုအောက်ပါကနေဒါ, တူညီတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအဘို့စီစဉ်ထား DCH-3, ပိုကြီးဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ 460 မိတ္တူ builtThe DHC-3 t ကိုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ယူဂျင်း Heyart
de Havilland DHC-3 Otter Ng FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 20.9 ကို MB
ဤတွင်အနာဂတ်လွန်သောရေယာဥ်ပျံဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာကစိတ်ကူးယဉ် "ရှေ့ပြေးပုံစံ" ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်အလားအလာဖြစ်နိုငျသညျ! အလွန်ကောင်းသောအသံများကို, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ကြီးမားသောရှေးခယျြမှု, မော်ဒယ်အရမ်းသပ်ရပ်။ ကကြိုးစားရမယ်! ထို့ပြင် "Otter" (ပြင်သစ်, "ဖျံ") လို့လူသိများတဲ့အက de Havilland ကနေဒါ DHC-3 တစ်ခု monoplane ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Heugene Heyart
de Havilland DHC2 အဘိဓါန် Beaver Alaska Tours မှ FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 11 269
Size: 19.3 ကို MB
အစေ့တို့သည်ဆူးပင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, AK အခြေစိုက်တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းတဲ့ရေယာဥ်ပျံ။ 3D အတွက်ပြည်ထဲရေး, ကောင်းစွာအသံပြန်ထုတ်ပေး။ သေးငယ်တဲ့အပန်းဖြေဘို့ပြီးပြည့်စုံသော! လည်းအဘိဓါန် Beaver (ပြင်သစ်, Beaver အဘိဓါန်) အဖြစ်လူသိများအဆိုပါက de Havilland ကနေဒါ DHC-2, Havilland ကနေဒါအကြမ်းတမ်းဖို့အဆင်ပြေအောင်, လေယာဉ်များကိုတည်ဆောက်က de, သေးငယ်တဲ့ monoplane.After ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မိုက်ကယ် Woolsey, မော်ဒယ်က de စတိဗ် Grant က
Fairchild 24-R2 1938 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 10.4 ကို MB
အမေရိကန်လေတပ် Corps နှင့်အရပ်သားအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် 1938 ဖန်တီးတစ်ဦးကရေယာဥ်ပျံ။ ပျံသန်းဖို့ nice, လက်တွေ့ပျံသန်းမော်ဒယ် 3D လေယာဉ်မှူးအခန်း, ထင်ဟပ်, ကောင်းစွာပွားဂရပ်ဖစ်ဟောင်းနွမ်းအသံ။ ကြိုးစားရမည်! အဆိုပါ Fairchild 24 တစ်ဦးအလင်းလေယာဉ်အမေရိကန် 1930s ခဲ့သည်။ ဒါဟာစစ်တပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်အဖြစ် USAAC အသုံးပြု ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဝီလျံ Ortis, Lionheart ဖန်ဆင်းခြင်း, Ltd